Kudla lubi ukubulawa kosopolitiki eKZN – LIVE Express
Umbiko wombutho wamaphoyisa kuleli, i-South African Police Service (SAPS) ukhomba ukuthi isifundazwe iKwaZulu Natali (KZN) yisona esihamba phambili ngezigameko zokubulala ezihlobene nepolitiki ngokwamacala abikwe phakathi kwamhla lulunye ku-Febhuwari kanye nomhlaka-5 August 2016.
Lokhu kuvezwe ngu-Major General Leon Rabie, ngenkathi amaphoyisa, abeholwa nguKhomishana wamaphoyisa osabambile, u-Khomotso Phahlane, ebethula umbiko kwikomidi lasephalamende elibheka indlela amaphoyisa abhekana ngayo nemibhikisho enodlame kanye nokubulala okwenzeka ngesikhathi esingaphambi kokuqala kokhetho.
U-Rabie uthi abe yi-18 amacala okubulala okuhlobene nezepolitiki kanti kuphinde kube namanye okuzama ukubulala ngaphezulu.
Uqhube wathi iningi lamacala ahlobene nodlame ngesikhathi sokhetho bekungawokusabisa njengoba efinyelele kuma-29 esewonke.
Amanye amacala abe maningi ngawokuhlukumeza ngenhloso yokudala umonakalo emzimbeni , nalapho kubikwe amacala angama-21.
Emacaleni ayi-18 abikiwe okubulala, ayi-13 abikwe e-KZN, amane abikwa e-Gauteng kanti linye elibikwe e-Eastern Cape.
Balinganiselwa kuma-490 abasolwa ababoshiwe kanti ababili babo balahlwe amacala, kwathi amacala ayi-12 ahoxiswa.